Max Energy | Stations
Due to its geographical position bordering five populous and rapidly developing countries, Myanmar has every chance of becoming the future logistics hub of Southeast Asia. Max Energy’s filling stations are spread across the country and located strategically in major cities and along main supply roads in order to allow for and to encourageanationwide consumer brand loyalty and capture this future demand.
YANGON DIVISION (22)
Max Energy (Thein Phyu)
အမှတ်(၁၂၂)၊သိမ်ဖြူလမ်းမကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ (ဆရာဝန်အသင်းတိုက်ရှေ့)
Max Energy (Kyun Taw)
ဟံသာဝတီလမ်းနှင့်ကျွန်းတောလမ်းဒေါင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပြတိုက်အနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Max Energy (Ahlone)
ကမ်းနားလမ်းနှင့်အလုံလမ်းဒေါင့်၊မြေတိုင်းရပ်ကွက်၊(23-ဂျီ)၊ မြေကွက်အမှတ်(2/B)၊အလုံမြို့နယ်။ (MECရုံးရှေ့)
Max Energy (Tamwe)
Max Energy (Bahan)
အမှတ်(၇၆)၊ ဆရာစံမြောက်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ (Passport ရုံးရှေ့)
Max Energy (Thuwanna)
မြေကွက်(၂/ဘီ-၁)၊မြေတိုင်း၊၂၄ သံသုမာလမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ (သုဝဏ္ဏပန်းခြံအနီး၊ သုဝဏ္ဏ အ.ထ.ကရှေ့)
Max Energy (Tharkayta)
Max Energy (Aung Mingalar)
Max Energy (Padauk Chaung)
သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်အဝင်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ (သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်အနီး)
Max Energy (Dagon Ayar)
Max Energy (South Okkalapa)
မြေကွက်အမှတ် (၁၄၃၃ – B)၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
Max Energy (Hlegu-1)
အမှတ်(၈/၂)၊ ငှက်ပျောတော၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်- ပဲခူး ကားလမ်း။
Max Energy (Hlegu-2)
အမှတ်(၅၀/၅)၊ ငှက်ပျောတော၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်- ပဲခူး ကားလမ်း။
Max Energy (Sin Ma Lite)
ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဘောကျင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဘေး ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Max Energy (Hmawbi-1)
မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ်။
Max Energy (Hmawbi-2)
အမှတ်(၄)လမ်းမကြီး ၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက် ၊ ကျောက်ပုန်းမြောက်ကွင်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ်။
Max Energy (Lay Daungkan)
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးရွာ(၁)၊အမှတ်(၂) လမ်းမကြီးဘေး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။
Max Energy (Shwepyithar)
အမှတ်(၄)လမ်းမကြီး ၊ အုတ်ဖိုကျေးရွာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်ရှေ့၊ ရွှေပြည်သာ။
Mingaladon(PMP) Filling Station
ကွင်းအမှတ်(၅၂၉-အေ)၊ ရန်ကုန် – ပြည်ကား လမ်းမဘေး၊ ပျဉ်းမပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Max Energy (Dala)
ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းထောင့်၊ ဒလ-တွံတေးကားလမ်း၊ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
Max Energy (North Dagon)
(၄၅) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့ နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Max Energy (Kamarkyi)
(၁၀/တောင်)ရပ်ကွက် သန်လျင်တံတားချဉ်းကပ်လမ်း ၊ ကမာကြည်အဝိုင်းထိပ်အနီး ၊ သာကေတ မြို့နယ်
Max Energy (Nay Pyi Taw)
ပျဉ်းမနားမြို့ရှောင်လမ်း၊ ဘောဂသီရိကားဝင်းရှေ့၊ ဘောဂသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
Max Energy (Taungsin Aye)
အင်ပင်ကျေးရွာ ၊ အင်ပင်အုပ်စု ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
Max Energy (Mandalay-1)
၈၄ လမ်း x ၃၂ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး ။
Max Energy (Mandalay-2)
နတ်ရေကန်ရပ်ကွက်၊ (၆၈)လမ်း၊ မန္တလေး (အမရပူရမြို့နယ်)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (နယ်စပ်စည်ပင်ရုံး)ဘေး
Max Energy (Mandalay-3)
၃၆ x ၃၇ ကြား၊ မန္တလေး -ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Max Energy (Meiktila-1)
မိတ္ထီလာ(သီးကုန်း) ယာဉ်ရပ်နားစခန်းဝင်း၊ (နေပြည်တော်-မန္တလေး) အမြန်လမ်းမကြီး မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မန္တလေး မြို့။
Max Energy (Meiktila-2)
မိတ္ထီလာ – မြင်းခြံကားလမ်း၊ ဝန်ဇင်းရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့။
Max Energy (Meiktila-3)
အမှတ် (၂၂၅)၊ ညောင်တုန်းရွာ၊ ရန်ကုန်-မိတ္ထီလာ အဝေးပြေးလမ်းဟောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့။
Max Energy (Mandalay-4)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊(ဈ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်းဟောင်း။
Max Energy (Thaton)
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် ကားလမ်းမဘေး၊ မြေနီကုန်းကျေးရွာ ၊ သထုံမြို့။
Max Energy (Moke Ta Ma)
ကျောက်တွင်းကုန်းရပ်၊ ဟံသာဝတီရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။
Max Energy (Inntakaw)
Max Energy (Thet Ka La)
ပဲခူး-သန်လျင် ကားလမ်း၊ ကဝမြို့နယ် ၊ပဲခူးမြို့။
Max Energy (Thanatpin)
Max Energy (Oktwin)
ဘန့်ဘွေးကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်းဟောင်း၊ ပဲခူးတိုင်း။
Tharyawaddy Filling Station
ကွင်းအမှတ်(၁၂၅၂)၊ သင်တောရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန် – ပြည်ကားလမ်းဘေး၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
Max Energy (Pathein-1)
မဉ္ဇူလမ်း ၊ ကုန်တင်ကုန်ချကားကြီးဝင်းရှေ့ ၊ အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက် ၊ ပုသိမ်မြို့။
Max Energy (Pathein-2)
အမှတ် (၁၆၄/A)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ် အဝေးပြေးလမ်း၊ ပုသိမ် Toll Gate အနီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း ၊ ဟင်္သာတအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းဝင်းရှေ့ ၊ လယ်တော်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဟင်္သာတမြို့။
Max Energy (Pantanaw)
ရန်ကုန်-ပုသိမ် ကားလမ်းမဘေး ၊ မြို့ကွက်သစ် ၊ ပန်းတနော်မြို့။
Max Energy (Yegyi)
ရေကြည်မီးရထားမြို့ကွက် ၊ ဆရာစံရပ်ကွက် ၊ရေကြည်မြို့နယ်။
Max Energy (Kyonpyaw)
အမှတ် (အေ)ရပ်ကွက် ၊ မြဝတီရပ်ကွက် ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်။
Max Energy (Ngathaingchaung)
အမှတ် (၂-အေ ဈေးပိုင်း)၊မြို့မရပ်ကွက် ၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့နယ်ခွဲ၊ရေကြည်မြို့နယ်။
Max Energy (Chaungtha)
Max Energy (Nyaung Don)
အမှတ်(၃၇၉)၊ ညောင်ဝိုင်းချောင်း၊ ဇီးဖြူကျွန်းကျေးရွာ၊ ညောင်တုန်းမြို့။
Max Energy (Sagaing)
စစ်ကိုင်း – ရွှေဘိုလမ်းမကြီးဘေး ၊ အောင်သာအုပ်စု ၊ ရွာသစ်ရွာ ၊ လက်ပံရိုး ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
Max Energy (Monywa-1)
မုံရွာ-မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်း၊ အောင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
Max Energy (Monywa-2)
မုံရွာ-ကလေးဝ လမ်းမကြီးဘေး၊မုံရွာမြို့အထွက်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Max Energy (Myinmu)
မန္တလေး – မုံရွာ လမ်းမကြီးပေါ် မြင်းမူမြို့အထွက်